Ny fananana hazon-damosina (1)
Naseho ny : 25 oktobra 2021
Tsapa ankehitriny fa miroaroa saina sy mitebiteby ary tsy mahatoky tena ny tanora noho ny tahotra mameno ny fony manoloana ny ho aviny. Hany ka tsy mari-toerana ny fiainany ary maro no tsy mijoro amin'ny heviny sy tsy mitàna ny teny nomeny. Jesoa anefa manome toky fa eo mandrakariva hitari-dalana azy ireo. Katesizy momba ny fananana hazo-damosina, iarahana amin'i P. Rakotonarivo Fidy Isidore.
Fanehoana ny harem-panahy (10)
Naseho ny : 24 oktobra 2021
Mbola miaina ao anatin'ny firaisam-po isika ary izay no atao hoe fiombonana ao amin'ny eglisy, hampiraisin'i Jesoa kristy, filoha tokana. Ny fahasamihafana dia mitazona sy mandrisika amin'ny fifampitsinjovana. Ny finoana dia mivelatra ara-jeografia, mifanaraka amin'ny fitomboan'ny mponin'ny tany. Katesizy momba ny fanehoana harem-panahy, iarahana amin'i P. Rakotondramanana Soloniaina Jean Emilien.
Fanehoana harem-panahy (9)
Nisy fivoarana hatrany ny fomban'ny fiangonana, ka nanjaka ny firaisam-po. Araka ny voalaza hoe : izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Katesizy momba ny fanehoana harem-panahy, iarahana amin'i P. Rakotondramanana Soloniaina Jean Emilien.
Fanehoana ny harem-panahy (8)
Naseho ny : 22 oktobra 2021
Ny fanaovana ny asa fanasoavana dia ilaina lanjalanjaina satria nomen'Andriamanitra ny fahafahana handalina isika. Ny fahamaroan'ny fikambanana dia ahafahana maneho fahasamihafana sy fifamenoana. Katesizy momba ny fanehoana harem-panahy, iarahana amin'i P. Rakotondramanana Soloniaina Jean Emilien.
Pejy 9 amin'ny 52